Guuxa EPRDF iyo TPLF oo Ilbaabda soo jiidhaya. – Xeernews24
Guuxa EPRDF iyo TPLF oo Ilbaabda soo jiidhaya.
16. Dezember 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Madaxii hore ee arrimaha xidhidhka dawlada Ethiopia, Getechew Reda, ayaa ku eedeeyay xukuumada Abiy Ahmed inay dhinac u riixayso qoomiyada Tigreega ah. Reda, oo wali madaxda sare ee EPRDF iyo TPLF ah, ayaa sheegay in garsoorka xukuumadu yahay mid la kala dooranayo oo dad gaar ah loo adeegsanayo. Getechew oo la hadlay wakaalada wararka ee Reuters ayaa sheegay in talaabada dawladu qaaday inay shaqayn doonin.
Qoomiyada Tigreega, oo 27 sano awooda haysay, ayaa guux ka muujisay qaqabashada 60 qof oo isugu jiray saraakiil sirdoonka ah iyo madaxdii shirkada METEC oo u badnaa Tigree. Waxaa jira dibadbaxyo ka dhacay meelo gobolka ah oo lagu codsanayo inla la ilaaliyo dasduurka dalka.
Abiy Ahmed ayaa dhowaan warbaahinta u sheegay in xukuumadiisu ay sharciga horkeeni doonto dhamaan dadkii lagu tuhmay gaboodfalyada, balse waxa u hoosta ka xariiqay In aan qoomiyad ama qabiil gaar ah loo ciqabaynin danbiyo ay shaksiyaad galeen.
Isbadalka dalka ka curtay ayaa si gaar ah u sameeyay qoomiyada Tigreega iyada oo madax badan lagu eedeeyay danbiyo, kuwa kale la qabtay, halka qaar kale ahmiyadoodi siyasadeed hoos loo dhigay. Arrimahaas ayaa cabsi iyo shaki weyn ku abuuray qoomiyada iyo siyaasintooda oo hadda u muuqda mucaarid.
Mid kamid ah la taliyaasha Abiy Ahmed ayaa Reuters u sheegay in shaqada laga eryay ilaa 160 jenaraal oo lagu eedeeyay inay magaca dawlada falal argagixiso ku fuliyeen.
Waxaa jira ismaan-dhaaf xoog leh oo u dhaxeeya qoomiyada Tigreega iyo Ethiopia inteeda kale. Dadka Tigreega ayaa ku doodaya inay Ethiopia xoreeyeen, horumar keeneen, dhaqaalaha kor u qaadeen islamarkaana nidaamka federaalka ah udbaha u taageen.
Ethiopia inteeda kale ayaa dareensan in 27kii sano ee TPLF talada haysay ay ku kacday gaboodfalyo aan horay loo arag, musuqmaasuq aan lala gabban iyo iyada oo qoomiyada Tigreegu awooda oo dhan maroorsatay. Waxaa intaa dheer, in TPLF abuurtay colaad u dhaxaysa qoomiyadaha kala duwan si la isugu mashquulo; oo aan TPLF loola xisaabtamin.
Taageerayasha TPLF ayaa aad uga walaacsan isku-dhacyada qoomiyadaha iyaga oo ku eedeeyay Abiy in uuna colaada waxba ka qaban. Waxaa kale oo ay ku andacoonayaan in dad badan oo Tigree ah laga soo eryay Ethiopia inteeda kale kuwaas oo iyaga oo fara-madhan hadda ku sugan ismaamulka Tigreega.
Colaada salka ku haysa Qoomiyadaha iyo kacdoonkii qoomiyadaha qaarkood ayaa ka horeeyay xukumada Abiy Ahmed iyaga oo ka dhashay dulmigii ay dadka ka cabanayeen ee xiligii TPLF talada haysay, haseyeeshe waxaa jira dad aan Tigree ahayn oo dawlada ku dhaliila sida ay u maamushay colaadaha salka ku haya isirka.
Waa xaqiiq in qoomiyada Tigreegu dareemayso go’doon oo isbadalka dalka ka curtay awoodoodi hoos u dhigay, laakiin waxaa la gudboon inay isweydiiyaan sababta go’doonka dhalisay iyo say kaga bixi karaan. Ma aha wax qarsoon in maamulka iyo dadka Tigreegu hubaysan yihiin, laakiin dhanka kale waa hubaal inayna saxiib ku lahayn Ethiopia inteeda kale, wadamada gobolka iyo beesha caalamka, sidadarteed waxaa suurtagal ah inayna colaad ku degdegin.
Inkastoo xukumada Addis Ababa dhowr jeer sheegtay in danbiilayaasha oo kaliya la ugaadhsanayo, haddana maamulka Tigreegu arrintaas kuma qancin sababtoo ah danbilayaasha ayaa u badanaya qoomiyada Tigreega maadama ay awooda badankeeda gacanta ku hayeen islamarkaana lagu tuhmayo gaboodfalyo iyo musuq badan, haseyeeshe xukuumadu waa inay sharciga wada horkeento cid kasta oo lagu tuhmayo danbi, qoomiyada ay dooni haka soo jeedane.
Dadka Tigreega waxa ay ku qasban yihiin inay laba midkood doortaan: inay dawlada la shaqeeyaan oo diyaar u noqdaan dhiibista dadka lagu tuhmayo danbiyada kala duwan iyo inay si toos ah u diidaan dawlada islamarkaana diyaar u noqdaan natiijada ka dhalan karta arrintaas – waa go’aan adag oo samayn ku yeelan kara Tigreega iyo dalka oo idil haseyeeshe waxaa iyaduna adag inla isdaawado oo xaaladu sidan iska ahaato.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/12/shirkii.jpg 473 800 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-12-16 15:19:032018-12-16 15:19:03Guuxa EPRDF iyo TPLF oo Ilbaabda soo jiidhaya.
Shirkadda Qatar Airways oo bilaabeysa duulimaad toos ah oo u dhaxeeya Muqdisho... DEG DEG+DHAGEYSO: Khilaafkii Guddoonka Golaha Shacabka Oo Xal Laga Gaadhay.